Fibre optic fibre optic jiro dobo Flooring fametrahana tariby - China KepuAi Photoelectric
Fibre optic fibre optic jiro dobo Flooring fametrahana tariby
Fibre marika: Mitsubishi
Fibre savaivony: 0.75mm * 7 kofehy & 1.2mm * 14 kofehy & 1.5mm * 1 kofehy
Light maotera: DMX 1002 / DMX 502 / DMX 1001 & 75w mazava maotera
Ny mety: -katerena
An Optical fibre tariby dia tariby misy iray na maromaro Optical kofehy izay ampiasaina mba mamindra mazava. Ny Optical fibre singa tsirairay dia matetika mifono amin'ny plastika sosona, ary hita ao amin'ny fantsona fiarovana ny tontolo iainana sahaza ny telegrama izay ho napetraka.
Amin'ny ankapobeny, dia Manoro hevitra mampiasa 1.5mm * 1 tariby, 0.75mm * 3 tariby sy 1.2 * 14 tariby ho an'ny madinika, salantsalany sy lehibe toerana, miampy 75w / 45w / DMX1002 mazava maotera.
Raha te-handravaka ny lelan-kamory, dia Manoro hevitra mampiasa lafiny 10mm hazavana kofehy sy DMX mazava 1002 maotera.
Mba andefaso anay ny nanontany ny sary sy ny zavatra takiana, avy eo fa handefasanay anareo quotatio
Standard fonosana: Carton boaty.
Fonosana for Chandelier: vata hazo.
Previous: Fibre optic chandelier trano fisakafoanana pendant mazava, trano fandraisam-bahiny pendant fahazavana, hazavana pendant fandraisana
Manaraka: Fibre Optic Lighting for Garden, Park Optical fibre jiro
fampiharana ny fibre ny hazavana
fampiharana ny Optical fibre
fiara valin-drihana mazava
valin-drihana fibre optic
fibre optic valin-drihana
fibre optic orinasa
fibre optic famolavolana
fibre optic faran'ny
fibre optic lamba
fibre optic fitaovana
fibre optic jiro
fibre optic jiro dobo
fibre optic dobo mazava
fibre optic vidin'ny
fibre optic vokatra
fibre optic tetikasa
fibre optic kintana valin-drihana
fibre optic kintana mazava
fibre optic kintana
fibre optic kofehy
fibre optic famatsiana
fibre optic teknolojia
fibre optic hazo
fibre ny hazavana fangatahana
fiberstars farihy jiro
fibre optic valin-drihana jiro
nitarika optic fibre mazava
optic fibre mazava
Optical fibre miasa
ivelan'ny trano fibre optic tariby
dobo fibre optic mazava
dobo fibre optic jiro
feno kintana fibre optic fitaovana
dobo filomanosana jiro
fampiasana ny Optical fibre